I-XL IINKCUKACHA - IMIGAQO EZIQHELEKILEYO NEMITHETHO | FXCC
Ikhaya / I-XL IINKCUKACHA - IMIGAQO EZIQHELEKILEYO NEEMITHETHO
XL AKHAWUNTI - IMIGAQO EYODWA NEEMEKO:
Uyavuma ukuba ngokuthatha inxaxheba kule Phakamiso ("UkuPhakamisa"), uya kubopha ngale migaqo kunye nemimiselo ("Imigomo") kunye neSivumelwano seKhasimenti seCFD kunye neZibonelelo eziPhezulu zeeNtengiso, kunye nazo zonke ezinye iimimiselo zezoshishino kunye nemiqathango ezisebenza kwiakhawunti yakho yorhwebo. Kufuneka ufunde le Migaqo ngokucophelela uze uziqhelise kunye nathi Isaziso sokwazisa ingozi.
Abaxhasi bamalungelo: Entsha yeFXCC ngqo Abaxhasi abavula kwaye baxhaswe ngeakhawunti zabo ngemali (okanye i-akhawunti yezobulungisa) phakathi kwe-$ 100 US kunye ne-$ 10,000 US.
Akukho ziKhomishini okanye i-Swaps kwiAkhawunti ze-XL kunye ne-deposits kunye / okanye ukulingana phakathi ($ 100 - $ 10,000).
I-Akhawunti kunye ne-deposit kunye / okanye ukulingana ngaphezulu kwe-$ 10,000 iya kusekwa kwi-Akhawunti ye-Standard kwaye iya kuthotyelwa kwiKomishini kunye neS Swaps njengoko kuboniswe kwiwebsite ye-FXCC phantsi kwecandelo le "Iimpawu zokuThengisa".
Umncedisi wale phromoshini unokufumana kuphela i-akhawunti ye-XL yorhwebo.
Ukuphakama okuphezulu kwe-Akhawunti ye-XL kuxhomekeke kubukhulu be-akhawunti njengezantsi:
I-Deposit / Imali phakathi kwe-$ 100 kunye ne-3000 ye-$: Phakamisa ukuya kwi-1: 300
I-Deposit / Imali phakathi kwe-$ 3000 kunye ne-5000 ye-$: Phakamisa ukuya kwi-1: 200
I-Deposit / Imali phakathi kwe-$ 5000 kunye ne-10,000 ye-$: Phakamisa ukuya kwi-1: 100
Ubungakanani bobukhulu bezorhwebo Umxhasi ofanelekileyo angavula nanini nayiphi na ixesha elinikiweyo aliyi kudlula ii-standard standard ze-10.
I-FXCC iya kuba nelungelo, ngokwengqiqo yalo, ukuba yamkele amaKlayenti athulwe yi-3rd iqela phantsi kwe-akhawunti ye-akhawunti ye-XL. Olu hlobo luqaliswe ngabaxhasi kwaye bavuma ukuba iimali ezongezelelweyo zokuqala (i-$ 5 ngexabiso eliqhelekileyo) zingasetyenziswa kwiAkhawunti zazo ze-XL.
Nasiphi na isibonakaliso sokuxhaphaza, ukusetyenziswa kakubi okanye ezinye iindlela zokukhohlisa okanye ukukhwabanisa kwi-akhawunti yomthengi, okanye enye inxulumene okanye ixhunywe kwi-Akhawunti ye-XL iya kungafaneleka i-akhawunti kuyo yonke inzuzo eyenziwa kunye / okanye nayiphi na inzuzo eyenziwe phantsi kwalo Mkhuthazo.
I-FXCC inelungelo lokumisa nayiphi na i-Akhawunti ye-XL okanye iguqule nayiphi na i-Akhawunti ye-XL kwi-"Akhawunti eseMgangathweni" ngokwengqiqo yayo, ngaphandle kwesidingo sokubonelela nasiphi na isizathu sokumiswa okanye ukutshintsha.
Nayiphi na ingxabano, ukuchazwa ngokungafaniyo kweMigqaliselo neMibandela ekhankanywe ngasentla okanye imeko ivela kwaye ingabonakaliswa yiMigomo neMibandela yokuPhakanyiswa, loo mbambano okanye ukuchazwa ngokuchaseneyo kuya kuxazululwa yi-FXCC ngendlela ebonakala iyona nto ibonakalayo kubo bonke abachaphazelekayo. Esi sigqibo siya kuba sigqityi kunye / okanye sibophe kubo bonke abangena. Akukho ncwadana iya kufakwa.
I-FXCC inelungelo, njengokuba kungengqiqo yalo kuphela ibona kufanelekile, ukuguqula, ukulungiswa, ukunweba, ukumisa, ukukhansela okanye ukuphelisa ukuPhakanyiswa, okanye nayiphi na into yoPhakamiso, nangaliphi na ixesha nangasiphi isaziso esandulele. Ngaphandle kweemeko, i-FXCC iya kuhlawulwa nayiphi na imiphumo yoluphi utshintsho, ukulungiswa, ukumiswa, ukukhanselwa okanye ukupheliswa koPhuculo.